Date My Pet » 7 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Usati Dating ane Foodie
7 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Usati Dating ane Foodie
Last updated: Jun. 02 2020 | 2 Maminitsi verenga
Kunyange ini handisi kukuchidzira zvokudya hombe, dzakawanda neshamwari dzangu uye misi zvave rinozviti foodies. Izvi izwi hazvirevi chete kureva kutora mifananidzo zvokudya uye varindi kuti mumagariro vezvenhau. Foodies muropa chikafu, uye kuburikidza ukama hwangu foodies apo Ndakadzidza chete sei kure vachaenda zvokudya.
Food iri zvose
kupindwa muropa kwavo zvokudya kunopfuura chinhu zvaunogona mufananidzo. Zvokudya ndiwo okutanga nookupedzisira pokutanga zuva. uye, hakuna mutsetse wakavhomorwa kuwana “akakwana” dzichikosheswa. Gadzirira vanofamba madaro akareba kuti yakakodzera mastrawberry.
“Zvakanaka pfungwa yeshoko”
Foodies nyanzvi kana totaura pairings chikafu. Kana ivo hunoratidza kudya hove pamwe mupunga kana nokusanganisa sauces mbiri pamwe chete, uende naro. Kazhinji pfungwa dzavo kuchaita meso enyu zvikuru huya hunenge dhishi.
Foodies uyewo vanowanzoona ufungisise siyana nokuda zvishoma nezvishoma anoravira zvokudya zvavo. Nepo izvi zvinganzwika one, chaizvoizvo kuchakubatsira kunzwisisa chikafu zvakawanda izvo zvinogona kubatsira ukama hwako.
Kana zviri Yelp kana Google, pakarepo pashure kuedza kuresitorendi mutsva kana dhishi, Foodie vako vachava kunyanyova rinofarira kunyora Kudzokorora kuti ave Foodie, vanonzwa mutoro kuudza vamwe foodies dzavo itsva vakawana kuwanikidza.
Ronga nguva yako kumativi kudya
Misi uye anofambira huchabatikana chikafu. Mikana vari vakaita mugomo mazita anofanira-edza madhishi uye mumaresitorendi. kugutsa navo, kutarisa pasi uye sanangurai shomanana avo maresitorendi kuti unoda kuedza.
Foodies kuva shamwari dzepamwoyo pamwe servers panguva yavo kufarira Restaurants. Vanova vose vasvike noukama pamusoro zvokudya asi nokuzivana munhu Server kungatungamirira discounts uye / kana chakavanzika madhishi. wo, kuva kufarira Server zvinoreva chete kuenda kuti resitorendi kana kuti Server ari kushanda.
Haangooni Foodie wako vanoda kuti adye panze asi vachava kunyanya zvichida kuva chaizvo batsira mukicheni. Paunenge kuwana kuedza zvinonaka Recipes, foodies vachava “rasika” mukicheni kwemaawa. Kana ivo vawane vari yokubikira kumunetsawo, Ini hunoratidza kubatana navo mukicheni kupedza nguva navo.
Nguva dzose kuziva nzvimbo imwe ndibhadhare mari muchitoro
Hauzivi kana ungada chinhu. Foodies kwete chete kuziva kunogona ndibhadhare mari muchitoro chiri asi vachava kuziva maawa. Gadzirira kuti yapera ndibhadhare mari muchitoro Zara.
Achifambidzana Foodie anogara rainakidza. By kumbundira kwavo mumatirauzi akafanana muropa, iwe uchava Zvechokwadi musambozvidya nzara rudo zvakare.
Kuita Pfungwa Dating uye Relationships
pamusoro 5 US Cities nokuti Single Men
5 Types Of Daters First. Nderipiko You?
7 Ugly Chokwadi About Modern Dating